Filtrer les éléments par date : samedi, 22 décembre 2018
samedi, 22 décembre 2018 19:19
TENDANCE NATIONALE 22/12/2018 à 19H
BV traité: 18959 / 24852 soit: 76.29%
Inscrits: 7783109 / 9913599 Rajouts: 16943
Blancs: 32545 Nuls: 61274
Suffrages exprimés: 3640338 soit: 97.49%
Taux de participation: 47.98%
13 Andry Nirina RAJOELINA 2007526 55.15%
25 RAVALOMANANA Marc 1632812 44.85%
Différence: 374 714 soit 10.30%
samedi, 22 décembre 2018 14:03
Tendances Nationales 22 décembre à 13h30
BV traité: 17 050 / 24 852 soit: 64.53%
Inscrits: 7 076 763 / 9 913 599
Votants: 3 387 100
Blancs: 29 654 Nuls: 55 419
Suffrages exprimés: 3 302 027 soit: 97.49%
Taux de participation: 47.86%
13 - RAJOELINA Andry Nirina : 1 825 158 soit 55.27%
25 - RAVALOMANANA Marc : 1 476 869 soit 44.73%
samedi, 22 décembre 2018 11:54
Fifidianana: Haneho ny heviny rahampitso ny Kandida Marc Ravalomanana
Manoloana ny fifidianana fihodinana faharoa, dia haneho ny heviny rahampitso alahady 23 desambra amin'ny 08ora alina ny Kandida Marc Ravalomanana.
samedi, 22 décembre 2018 11:47
Mampikony: Fokontany tsy nisy latsabato nefa namoahana voka-pifidianana
Tsy azo aneritreritra intsony ny zava-misy aty Mampikony manodidina iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina tamin'ny 19 desambra 2018 farany teo iny.
Fokontany miisa efatra ao amin'ny Kaominina Komajia, Distrikan'i Mampikony, izay samy misy birao fandatsaham-bato iray avy no tsy nisy fifidianana vanona io andron'ny 19 desambra io, noho ny asan-dahalo, dia ny tao Vantsiradrano izay no nopotehin'ny dahalo ireo fitaovam-pifidianana, ny tao Ambatomainty sy Ankisompy, izay naterin'ny Délégué d'Arrondissement tany amin'ny CED ny fitaovana fa nandositra niala tanàna ny olona tamin'ireo Fokontany ireo. Toy izany koa ny tao Tsinjorano.
Manamarina an-tsoratra ny tsy nisian'ny latsabato ihany koa ireo Sefo Fokontany voakasika.
samedi, 22 décembre 2018 11:41
Sambo Flying: Tatsambo sinoa roa maratra voatifitra ary tsaboina eto Sambava
Naterina aty amin'ny CHRR Besopaka ny alakamisy 20 desambra ireo teratany sinoa roa lahy, 27 taona sy 50 taona, izay voatifitra tany amin'ny sambo, tratra nitondra bois de rose tany amin'ny fari-dranomasina Antalaha iny.
Mbola arahi-maso akaiky ao amin'ny CHRR Besopaka, izay misy mpitsabo sinoa izy ireo, raha avy tany Antalaha izay nitrangany raharaha ny alakamisy.
Raha ny tokony ho izy dia ireo mpitandro ny filaminana any Antalaha no misahana ny raharaha fa noho izy aty amin'ny hopitaly misy mpitsabo sinoa, izay mifandray teny amin'izy ireo, no namindrana azy ireo aty Sambava hotsaboina, ka ny mpitandro filaminana avy amin'ny Polisy sy Zandary no miaraka miandry ireto sinoa roa ireto amin'izao.
samedi, 22 décembre 2018 11:28
Tolagnaro: Naratra mafy voatifitra izy, nisy namaky koa ny tranony
Manohy ny fitsaboan-tena aty Antananarivo i Ratovonony Tina Angelo, nentina tamin’ny fiaramanidina noho ny ratra vokatry ny tifitra nataon’olon-tsy fantatra azy teny an-dalana hamonjy fodiana ny alakamisy 20 desambra tamin'ny 2 ora maraina, rehefa avy nanatitra ekipa K25 nitondra voka-pifidianana tao amin'ny Vaomiera mpanisa vato (SRMV) Tolagnaro.
Nisy namaky ny alin’ny alakamisy nahavoa azy, hifoha ny zoma indray koa anefa ny tranony ao Esokaka. Entana maro no voalaza fa very tamin’izany.
samedi, 22 décembre 2018 11:22
Fifidianana: Nanafatrafatra ireo mpitsara filohan’ny SRMV ny SMM
Nanafatrafatra ireo mpitsara miisa 119 eny anivon’ny vaomiera mpanisa vato (SRMV) ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) mba tsy hiditra amin’ny adilahy politika amin’izao resa-pifidianana izao, fa hiaro ny hasin’ny mpitsara sy ny fianakaviamben’ny mpitsara, ary koa hitandro ny fahadiovana.
Hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ny SMM raha misy fandikan-dalàna, araka ny nambaran'i Clément Jaona, filoha lefitry ny SMM, nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony omaly maraina.
samedi, 22 décembre 2018 11:18
Rakotonarivo Thierry: Mangaraharaha ny fiasan’ny CENI
Nilaza ny filoha lefitry ny CENI Rakotonarivo Thierry fa voka-pifidianana avy amin’ny faritanin’Antananarivo no be indrindra amin’ny vokatra nasionaly navoakan’ny CENI hatramin’izao, manaraka ny vokatra avy amin’ny faritanin’i Fianarantsoa.
samedi, 22 décembre 2018 11:17
Fourniture en électricité: La CENI réquisitionne la JIRAMA
Ceci pour maintenir la fourniture en électricité de manière stable et permanente au niveau du siège de la CENI à Alarobia et dans les sites de la SRMV CED Tanà V à Nanisana et la SRMV CED Tanà VI à Ambohimanarina.